လက်တွေ့ တကယ်ပျောက်တဲ့ ဆီးကျောက်တည်၊ ဆီးသွားမရ ပျောက်တဲ့ဆေး - Software Guide
Home / ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ / လက်တွေ့ တကယ်ပျောက်တဲ့ ဆီးကျောက်တည်၊ ဆီးသွားမရ ပျောက်တဲ့ဆေး
လက်တွေ့ တကယ်ပျောက်တဲ့ ဆီးကျောက်တည်၊ ဆီးသွားမရ ပျောက်တဲ့ဆေး Reviewed by Ko Lin on 11:13:00 AM Rating: 5
လက်တွေ့ တကယ်ပျောက်တဲ့ ဆီးကျောက်တည်၊ ဆီးသွားမရ ပျောက်တဲ့ဆေး
Ko Lin 11:13:00 AM ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ
ယောက်ျားဆီး မိန်းမမီးတဲ့ ….ဆီးရောဂါက ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားတွေအတွက် ကြောက်စရာ ရောဂါ တစ်မျိုးပါ…ဒီရောဂါအတွက် ကုသဖို့ ဆေးနည်းလေးကို ကျွန်တော် ပုဂံ ပြည်သားမှ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း ကိုခင်မောင်ဦးတို့ ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းစားနေကြပါတယ်။ ထမင်းစားနေစဉ်မှာပဲ လူတစ်ဦး ရောက်လာပြီး ကိုခင်မောင်ဦးကို အဲဒီလူက လှမ်းပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ညာဘက်လက်မကို ထောင်ပြီး ကိုခင်မောင်ဦးရေ ခင်ဗျား ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးက တကယ့် ကောင်းတယ်ဗျာ…. ကျွန်တော် ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ဖို့ ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီးတွေ Date ပေးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်လ ပြည့်ရင် Operation ၀င်မယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ပြီး ခွဲစိတ်ဖို့ အတွက် အစစ အရာရာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ပေးတဲ့ ဆေးနည်းကို အိမ်က မိန်းမကို ချက်ခိုင်းပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ညမနက် ကျွန်တော် စားလိုက်တာ လုံးဝ ဆီးအိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်တွေက အားလုံးအရည်ပျော်ပြီး အားလုံးကုန်သွားပြီ။ ဆီးအိမ်ထဲမှာ ကျောက်မကျန်တော့ဘူး။ တစ်လ မပြည့်ခင်မှာပဲ ဆီးထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်တွေအားလုံး အကုန်လုံး ပြောင်စင်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆီးသွားရတာ အရင်လို မအောင့်ဘဲ သာမန်လူလို ဆီးသွားလို့ရသွားပြီ။
တစ်လ ပြည့်တာနဲ့ ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီး သွားပြီး ထပ်မံပြ၊ ဆီး၊ သွေး အားလုံးစစ်လိုက်တာ…ဆီးအိမ်ထဲမှာ ကျောက်တွေအားလုံး ကုန်သွားပြီ လုံးဝ(လုံးဝ) ဆီးအိမ်ထဲမှာ Negative ကျောက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အကြောင်း သိရှိရတော့တယ်။ ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီးကတောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ ခင်ဗျား ဘုရားမ တာပဲ….ဆီးအိမ်ထဲမှာ လုံးဝ ကျောက်မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ပေးတဲ့ ဆေးကို သောက်လို့ ပျောက်သွားတဲ့ ပုံစံနဲ့ နေလိုက်တယ်။ ဆေးရုံဆင်းကတည်းက သူတို့ ပေးတဲ့ ဆေးကို ဖြတ်ပြီး ကိုခင်မောင်ဦးရဲ့ ဗမာဆေးနည်းလေးကိုပဲ နေ့စဉ် ချက်စားတာ အခုလုံးဝ ပျောက်သွားပြီဗျာတဲ့…..
သူတို့ ၂ဦး ပြောနေတဲ့ စကားကို နားထောင်နေပြီး ကျွန်တော်ကြားထဲက ဖြတ်ပြီး …ကိုခင်မောင်ဦးရေ…ခင်ဗျားရဲ့ ဆေးနည်းကို ကျွန်တော်ကို ပေးပါလားဗျာ… ပုဂံ ပြည်သား ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေအားလုံး ဒီဆေးလေးကို မှီဝဲရအောင်လို့ …ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ သူတွေလည်း ဒီဆီးဒုက္ခက ကင်းဝေးရအောင်လို့ ကျွန်တော်က ပြောပြီး ဆေးနည်းလေးကို ဒီအတိုင်း ချရေးလိုက်ပါတော့တယ်….
ဆေးသောက်ရန် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ၂မျိုးက-
(၂) ငါးပြေမ(ငါး) (၁၅)ကျပ်သား တို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
-စောင်းလျားသီးကို အနေတော် ၂လုံးကိုယူပြီး ငါးပြေမ ၁၅ကျပ်သား(တစ်ကောင်)နဲ့ ချက်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
-စောင်းလျားသီး (၂)လုံးကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ ဓားနဲ့ အကွင်းလိုက်လှီး (အစေ့များမထည့်ရ)၊ အဲဒါကိုလှီးပြီး ပုဂံလုံးထဲမှာ ထည့်ထား။ သာမန်ဟင်းချက်တဲ့ နည်းအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူ/ နီကို ထောင်းထားပါ။
-ငါးပြေမကို အကြေးခွံချွတ် ဗိုက်ခွဲ….အူထုတ် ရေဆေး ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ဆား-နနွန်းထည့်ပြီးနှယ်….(အကောင်လိုက်ချက်ရန်)
-ပုံမှန် ဟင်းချက်တဲ့အတိုင်း ဆီသတ်၊ ဆား၊ နနွန်းနှယ်ထားတဲ့ ငါးပြေမ ကို အကောင်လိုက်ထည့် ရေအနည်းငယ်ရော မွေပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ငါးမိနစ်ခန့်နေလျှင် အကွင်းလိုက် လှီးထားတဲ့စောင်းလျားသီးကို ဟင်းအိုးထဲကို ရောထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပေးပါ။ ငါးကျက်ခါနီးလျှင် ဟင်းအိုးကို အောက်ချပေးပါ။ စောင်းလျားသီး အာနိသင်များသည် ငါးပြေမအတွင်းသို့ ရောက်သွားမည်။ စောင်းလျားသီး/ငါးပြေမဟင်းကို ထမင်းဖြူနှင့် ဆီးရောဂါ ဖြစ်နေသူများ စားသောက်ပါ။ ၁၂နာရီကျော်တာ နှင့် ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးကျင်ခြင်း ပျောက်သွား ပါလိမ့်မည်။ အထက်ပါ မြန်မာ ဆေးနည်းကို တစ်ပတ် ခန့်ချက်စားပါက ဆီးရောဂါ ပျောက်သွားမည်။
(မှတ်ချက် ထမင်းစားသည့်အခါ ရောဂါမပျောက်ခင် အရိုးစူး နိုင်ပါသည်။ ငါးပြေမငါးသည် အရိုးများသည့် ငါးဖြစ်၍ သတိထားစားရန် လိုအပ်ပါသည်။)
ပုဂံ ပြည်သား ပရိသတ်များ ဆီးရောဂါ ကင်းပြီး မိသားစုများနှင့်၊ ချစ်သူများနှင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘ၀လမ်းကို လျောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ……
သူငယ်ချင်း ကိုခင်မောင်ဦး မှ ဆေးနည်းကို မျှဝေထားပါသည်။